ဆင်: အဘယျသို့ Serey နှင့်အတူသွားမယ့် Die? - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကုမ္ပဏီ "ဆင်: အဘယျသို့ Serey နှင့်အတူသွားမယ့် Die?
ဆင်: အဘယျသို့ Serey နှင့်အတူသွားမယ့် Die?
အဆိုပါ CAN 2019 ၏ quarterfinals အတွက်အယ်လ်ဂျီးရီးယားဆန့်ကျင်အိုင်ဗရီကို့စ်၏ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် Serey သေသူသည်မိမိအအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဆုံးသတ်ခဲ့သည်ကြေညာခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အိုင်ဗရီကို့စ်ကစားသမားဘီနင် (6 သြဂုတ်လ) နှင့်ပြင်သစ်တွင်တူနီးရှား (10 သြဂုတ်လ) ဆန့်ကျင်ဖော်ရွေပွဲများအတွက်ဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကွင်းလယ်ကစားသမားတုံ့ပြန်မထားပါဘူး။
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: တရားမျှတရေးသူ့ယခင်ကလပ်ဆန့်ကျင်သည်သူ၏တိုင်ကြားချက်ပြီးနောက်ရှေ့နေများ Seri အဘိဓါန်ဂျင်းမိုက်ကယ်ပိုပြီး 450 သန်း FCFA တောင်းဆို
အဆိုပါ FIF ကစားသမားသည်သူ၏မရှိခြင်း "အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များ" အတွက်တောင်းပန်ထားပါတယ်ပြောသည်မှန်လျှင်, အတော်ကြာသတင်းရင်းမြစ်သူရွေးချယ်ရေးသပိတ်မှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသနည်းဟုမေး စစ်မှန်သောသို့မဟုတ်မှားယွင်းသော? ကျနော်တို့အောင်မြင်မှုမရှိဘဲ, သူ့ဗားရှင်းကိုနားထောငျဖို့ဘောလုံးသမား၏အဖွဲ့ဝင်များကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
ယခုအဘို့, မေးခွန်းများကိုရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် Serey သူသညျမိမိကိုသူမဟုတ်တော့ဆင်နှင့်အတူဆော့ကစားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ကဲ့သို့, မိမိရွေးချယ်ရေးသပိတ်မှောက်လိုသလား? Die စွပ်စွဲနေသည် သို့မဟုတ်ထိုသူသည်မိမိစိတ်ကိုပြောင်းလဲသွား? အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဖရိကချန်ပီယံ 2015 နှင့်အတူဖြစ်ပျက်သလဲ? ကျနော်တို့ပြန်လာကြလိမ့်မည် ...
အာဆင်နယ် DJ: သူမ၏သား၏အသေခံခြင်း၏အကြောင်းတရားများ